Iwo makumi matanhatu akanakisa bhodhi mitambo yevakuru | Ndipewo zororo
Isaac | 17/12/2021 17:48 | Yakagadziridzwa ku 20/12/2021 16:09 | General
Sezvo denda repasi rose rakaziviswa, mitambo yebhodhi yevakuru kutengesa kwavo kwawedzera. Chikonzero ndechekuti, pamberi pezvirambidzo uye kutya kwevamwe, chirongwa chiri nani uye chakachengeteka pane kugara pamba nemhuri kana shamwari dzakatenderedza tafura uye kupedza nguva dzakanakisa dzekuseka uye kukwikwidza kutamba mitambo iyi inonakidza.
Zvisinei, kune dzakawanda kwazvo zvokuti dzimwe nguva dzakaoma kuziva kusarudza. Mugwaro iri unogona kunzwisisa zviri nani zvese zvine chekuita neakanakisa bhodhi mitambo zvevakuru, mhando, uye dzakasiyana sarudzo dzaunofanirwa kushandisa nguva dzakanakisa kumba ...
1 Mitambo yebhodhi yevakuru inotengeswa zvakanyanya
1.3 Party & Co. Zvakanyanya 3.0
2 Nzira yekusarudza yakanakisa bhodhi mutambo wevakuru?
2.1 Inonakidza mitambo yebhodhi yevakuru
2.1.5 Mutambo webhodhi pakati peshamwari
2.1.6 Unodzima Kupenga
2.2 Zverudzi rwemhuri Trivial
2.2.1 Trivial Pursuit Yekutanga
2.2.2 Chengetedza iyo inorara
2.2.4 Ndiani anoda kuva mamioneya?
2.2.7 Tamba ne geek tsika
2.3 Kutamba neshamwari
2.3.1 4-mu-1 yakawanda-mutambo tafura
2.3.3 Ping pong tafura
2.3.4 Nguva yapera!
2.3.6 Ndine vaviri
2.3.8 KuParoti Kana hongu kana kwete Hapana zvakavanzika
2.4 Zvevachiri kuyaruka
2.4.1 Makomba nemaDragoni
2.4.2 Goriyati Sequence
2.4.3 Ndiri banana
2.4.4 Vedzinza reMatsotsi Ngatirambei tichitadza
2.5 Mitambo yebhodhi yevaviri
2.5.2 4 mumutsetse
2.5.3 (Un) vanozivana?
2.5.4 Rudo nemashoko
2.5.5 Devir Chakavanzika Code Duo
2.6 Strategy bhodhi mitambo
2.7 Mitambo yekubatana yakanakisa
2.8.1 2000 chidimbu chemufananidzo
2.8.2 Pirate ngarava 3D puzzle
2.8.5 UNO mhuri
2.8.7 Chess board, cheki uye backgammon
2.8.9 Deki yemakadhi
2.9 Chizvarwa chitsva
2.9.1 Mitambo yebhodhi yepamhepo uye mapurogiramu
2.9.2 Augmented chokwadi mitambo
3 Inowanzobvunzwa mibvunzo
3.1 Ndeipi mitambo yebhodhi yevakuru?
3.2 Kutengerei rudzi urwu rwevaraidzo?
3.3 Ndokuvatenga kupi?
Mitambo yebhodhi yevakuru inotengeswa zvakanyanya
Pane mari yakawanda, yakanakisa bhodhi mitambo yevakuruOse ari maviri emhando yepamusoro akatengeswa chizvarwa nechizvarwa, pamwe neazvino zvakanyanya. Nekudaro, iwe unogona kuzvirega uchitungamirwa nerunyorwa rwe Vatengesi vakanyanya kubva pachokwadi. Ndivo vatengesi vepamusoro uye, kana vakatengesa zvakanyanya ... imhaka yekuti vane chimwe chinhu chakakosha:
GUATAFAC - Mutambo we ...
Uri kuzoita mabiko kana musangano nemhuri kana shamwari? Unoda kuseka kwakavimbiswa here? Zvino mutambo webhodhi wevakuru ndiwo wawanga uchitsvaga. Yakagadzirirwa vanhu vanopfuura makore gumi nematanhatu. Une masekonzi masere ekufungidzira pfungwa dzinoshamisa dzemhuri yako neshamwari. Kuseka kutema uye majee akasviba akaunganidzwa mumazana mazana matsamba nemibvunzo uye makumi masere akakosha mavara.
Imwe yeakanakisa bhodhi mitambo yevakuru. Iine matambudziko emarudzi ese, ese akatakurwa nekuseka kwakanaka zvekuti kuseka kunoburitswa. Nemibvunzo isina musoro uye inosetsa. Yakakwana kuzvipa iwe chipo kana kupa kune vaunoda. Ehe, ndeye vanhu vanopfuura makore gumi nemasere ...
Party & Co. Zvakanyanya 3.0
Diset - Bato & Co ...
Kuti iri pakati pevanotengesa zvakanyanya hazvishamisi. Unogona kutamba muzvikwata, uine gumi nemaviri bvunzo dzakasiyana uye mana mapoka. Nekudhirowa bvunzo, mibvunzo, kutevedzera, kuita, nezvimwe. Imwe yeavo vese mune imwe isingambofi yakakunetsa kunyangwe iwe unotamba zvakadii, uye izvo zvichaita kuti munhu wese ave nenguva yakanaka yekutamba.
COCORROTO- Mutambo we ...
Mutambo wakashinga wemakadhi ane anopfuura mazana matanhatu emakadhi ekuvimbisa kusvika maawa mazana maviri nemakumi matatu nemana ekuseka. Mutambo wevakuru mune erootic, ushingi mamiriro, kuseka kutema, uye 600% tsika dzakasanganiswa. Chero chinhu chinoenda kuseka pasina kumira. Nokuda kweizvi, mutambi wega wega ane makadhi machena gumi nerimwe (mhinduro), uye mutambi asina kurongeka anoverenga kadhi rebhuruu rine nzvimbo isina chinhu. Nenzira iyi, mutambi wega wega anosarudza kadhi rinonakidza raanofanirwa kupedzisa mutsara.
Nzira yekusarudza yakanakisa bhodhi mutambo wevakuru?
Panguva ye sarudza yakanakisa bhodhi mutambo wevakuru Kusahadzika kungamuka, uye havasi vese vanofarira madingindira akafanana uye mafomati emitambo. Kune iwo emapoka akasiyana, kubva kune mamwe chaiwo kunhengo dzemhuri, mamwe anonyanya kukodzera mapoka eshamwari nekuda kwezvirimo kana dingindira, uye kunyangwe mamwe chaiwo maererano nerudzi rwemutambo uri mubvunzo. Naizvozvo, iwe unofanirwa kuziva iwo akasiyana anonyanya kudiwa madiki:
Inonakidza mitambo yebhodhi yevakuru
Kune mimwe mitambo yebhodhi yevakuru inomira pachena kunyanya kuseka kwavanoita, iwo anonakidza ayo chero munhu anozopedzisira nekuseka kwakachena. Idzo dzinokuisa kumamiriro ezvinhu anosetsa, kana kukuita kuti uburitse mweya wako wekusekesa. Iwo anokuita kuti upedze manheru asingakanganwike nevadikani vako vanozogara vari mundangariro. The funnyest zvose ndezvi:
Paunosangana nayo, ichave imwe yeaya ekutevedzera evakuru mitambo yebhodhi iyo ichava pakati pezvaunofarira. Yakagadzirirwa mhuri kana shamwari, nekuseka kwakavimbiswa zvizere uye kubata kwezano, mazinga akasiyana, mapoka, uye nechinangwa chekuwana imwe yemhando yega yega kadhi kuhwina.
Glop Pinta - Mitambo ye ...
Inogona kunge iri imwe nzira yakanaka kune yakapfuura, kana yakakwana, nekuti yakagadzirirwawo nguva idzodzo nemhuri kana shamwari kana iwe uchida imwe yekuvaraidza uye kunakidzwa. Asi, kusiyana neyakapfuura, ndeye pendi uye kufungidzira.
Mutambo unonakidza Wakagadzirwa MuSpain, wakavakirwa pamakadhi uye wakanakira kuseka neshamwari. Nekubata hooligan, iwe uchafanirwa kupomera uye ivo vachakupomera iwe, mukuwedzera kuzviisa iwe pachako kune zvisina musoro bvunzo uye kutora chikamu mumagariro matambudziko ausina kumbofungidzira. Mutambo waunoziva kuti unotanga sei, asi iwe hauzive kuti unoguma sei ...
Tenga Tribe of Scoundrels
Mutambo unonakidza wemazera ese uye ne120 yakasarudzika duels kuita huso nechiso uye kuratidza pfungwa dzako, kugona kwemuviri, kushinga, hunyanzvi, kana rombo rakanaka. Iwo anokurumidza uye anonakidza duels, uye umo vamwe vese vatambi vanozoita sevatongi kuti vaone kuti ndiani akunda.
Mutambo webhodhi pakati peshamwari
😈 Shamwari🤣 -Mutambo ...
Yakanakira kuungana kweshamwari, bachelorette kana bachelorette mapato, nezvimwe. Kuseka uye mavibes akanaka kutenda kumibvunzo yakazvipira iyo iwe yauchaiswa pasi nekuendeswa. Iwe ucharasikirwa nekunyara kwese nematambudziko uye mibvunzo iri pakati pemakadhi ...
Tenga Bhodhi mutambo pakati peshamwari
Imwe nzira yakanaka kune Party, yakagadzirirwa mhuri yese neshamwari, kubva pamakore masere. Mutambo unonakidza unosanganisa bvunzo dzemarudzi ese, sekuteerera, kudhirowa, kutevedzera, kupomerana zvisina musoro, uye kupenga kukuru kwekupedzisira. Wekutanga kuwana ese mashanu loci achahwina korona yaMambo weMapenzi ...
Izvo hazvidi maintroduction, ndezvemhando yepamusoro. Kune wese munhu, nechinangwa chekupa zviratidzo pasina kushandisa mazwi anorambidzwa. Iine zvakagadziridzwa zvemukati uye neanosvika 1000 mazwi uye 5 nzira dzakasiyana dzekutamba. Kana mukomana weAtari naXavier Deltell vakaomerwa nechigaro che cramps muchirongwa cheMe slips, ikozvino unogona kuvanzwira tsitsi ...
Imwe yekirasi pakati peiyo classics, yakapusa, iri nyore kutamba, yevateereri vese, uye inonakidza. Iyo shongwe yakavakwa nematanda emapuranga ayo iwe uchafanirwa kuchinjana kutora kunze uchiedza kusadonha. Haisi yekungobvisa chidimbu chako chete, asi nezvekuyedza kuita kuti chimiro chive chisina kugadzikana sezvinobvira kuitira kuti mupikisi anomubata mumutsara unotevera awedzere kuomesa.
Buy Jenga Tenga Giant Jenga
Zverudzi rwemhuri Trivial
Kana uchida mitambo yebhodhi yemhando yemhuri Trivial, nemibvunzo uye kupi kuratidza zvipo zvehungwaru uye tsika zvakakosha, saka iwe unofanirwa kutarisa kune iyi imwe sarudzo. Pano iwe uchaona zvimwe zvinyorwa zvine chinangwa chekupa mubairo uyo anoziva zvakanyanya:
Trivial Pursuit Yekutanga
Ehe, pakati pemitambo ye trivia, Trivial pachayo haigone kunge isipo. Mutambo wetsika trivia une zvikamu zvakasiyana umo iwe unoedza kunyatsopindura mibvunzo yese uye kuwana zvikamu zvese zvechizi pamberi pemumwe munhu.
Tenga Trivial Pursuit
Chengetedza iyo inorara
Kana iwe uri mutsigiri weLa que se avecina, saka une rombo rakanaka, sezvo paine mitambo yebhodhi yakadai seTrivial ine akawanda madingindira (Harry Potter, Star Wars, Dragon Ball, Lord of the Rings, The Big Bang Theory. ...), pakati pavo zvakare Spanish series LQSA. Iwe unofunga iwe unonyatsoziva mavara ayo uye zvese zvakavanzika zveakateedzana? Zviedze…
Tenga Trivial LQSA
Goriyati - Mbama, Mutambo we...
Imwe trivia mutambo wemhuri yese, kubva pamakore masere. Bhodhi, makadhi makumi mashanu ane mibvunzo mazana mashanu, uye huchenjeri hwako hwekupindura nemazvo uye kunwisa zvibodzwa. Ndiwo masimba, asi chenjera ... mibvunzo izere nemiteyo, uye dzimwe nguva njere dziri nani pane kumhanya.
Ndiani anoda kuva mamioneya?
Vanhu kubva pamakore gumi nemaviri vanogona kutamba, uye nevatambi vaviri kana kupfuura. Mutambo webhodhi uyu wevakuru unobva pamibvunzo ine mukurumbira paterevhizheni ine zita rimwechete. Iwe uchafanirwa kupindura mibvunzo, uye iwe uchave uine akatevedzana ejee kana sarudzo yave yakaoma. Mhinduro dzesarudzo dzakawanda dzinopihwa kwauri, uye uchafanirwa kusarudza iyo chaiyo, uchiwedzera nhanho yekuomerwa nguva yega yega.
Tenga Ndiani anoda kuve mamirioni?
Mutambo webhodhi wemhuri yese zvichibva pamubvunzo weterevhizheni. Iwe uchafanirwa kuyedza ruzivo rwako mumiedzo mitanhatu yakasiyana, nemibvunzo inopfuura zviuru gumi uye rosco yekupedzisira kuyedza kufungidzira mamwe mazwi nguva isati yapera.
Hasbro Mitambo -...
Imwe yemitambo inonakidza kunze uko, uye yakapusa, asi iyo inoisa fungidziro yako, hunyanzvi uye mazwi muyedzo. MuScattergories unogona kutamba kubva ku2 kusvika ku6 vatambi, kubva pamakore gumi nematatu, uye umo iwe uchafanirwa kuwana mazwi echikamu uye anotanga nemavara chaiwo.
Tamba ne geek tsika
Tamba ne geek tsika ...
Zita remazera ese uye revateveri venyika yetekinoroji, Internet, mitambo yemavhidhiyo, ngano dzesainzi uye magamba makuru. Ndiko kuti, kune geeks. Saka iwe unogona kuyedza ruzivo rwako kana rweshamwari dzako pane ese misoro iyi.
Kutamba semhuri hakuna kufanana nekuzviita neshamwari, uko mamiriro ekunze akati siyanei zvishoma. Anonakidza kwazvo, ane zvirimo zvinogona kusanganisira kukuratidza maitiro aunongozviratidza chete neshamwari, kana izvo zvisina kukodzera mhuri yese. Kune idzo nguva neshamwari dzako dzepamusoro, iwo akanakisa mazita aunogona kuwana ndeaya:
4-mu-1 yakawanda-mutambo tafura
Leomark Multigame tafura ...
Iyi tafura yemitambo yakawanda yakanakira kutamba neshamwari. Ine mitambo mina patafura imwe chete, yakaita semabhiridha, foosball, ping pong, nehockey. Nemhando yezvinhu zvakadai sehuni, chimiro chakasimba, zviyero zve 4 × 120 cm bhodhi uye 61 cm kureba. Inounganidzwa nekukurumidza uye nyore uye ine yeEuropean mhando uye chengetedzo zvitupa.
Tenga tafura yemitambo yakawanda
A quality table football football, muMDF huni nehupamhi hwe 15 mm. Zviyero ndezve 121x101x79 cm. Nemakumbo akagadzikana uye akareba-anogadziriswa. Inosanganisira zvinhu zvakaita senge pakaunda yechinangwa, ine simbi simbi uye isingatsvedzeri erabha mibato, mifananidzo yakapendwa, uye 2 makapu ekubata. Mabhora maviri nemirayiridzo yekukwira inosanganisirwa.
Ping pong tafura
Dione S500o - Tafura ...
Kupeta ping pong tafura kuti isatore nzvimbo, yakakodzera mukati nekunze, sezvo inopokana nezvinhu. Iine bhodhi rakasimba rine pamusoro pe 274 × 152.5 × 76 cm. Inosanganisira 8 mavhiri kuti ikwanise kutendeuka kana kuifambisa zviri nyore, pamwe chete nebhureki kudzivirira kuti isafambe panguva yemutambo. Mabhora emitambo nemapadhi haana kubatanidzwa, asi unogona kuzvitenga zvakasiyana:
Tenga ping pong tafura
Tenga seti yefoshoro nemabhora
Repos kugadzirwa- Nguva ...
Mutambo wakakwana weshamwari umo iwe uchafanirwa kufungidzira hunhu. Vanogona kunge vari chaivo kana ngano vanhu vane mukurumbira, uye zvese nekuda kwetsananguro dzinopihwa dzemunhu wega wega pasina kudoma mazita. Kuti muchikamu chekutanga, muchikamu chinotevera chikwiriso chinokwira uye vanofanirwa kurova izwi rimwe chete. Muchikamu chechitatu, kutevedzera chete ndiko kunoshanda.
Tenga Nguva yapera!
Mutambo wemakadhi ane akasiyana minigames. Inokodzera zera 7 zvichikwira. Iwe unofanirwa kuwana makadhi ane chiratidzo chakafanana nechako uye ubate totem. Iine zvinopfuura makumi mashanu zviratidzo uye 50 makadhi akasiyana. Kumhanya, kucherekedza uye mafungiro achave akakosha.
Tenga Jungle Speed
TENGO DUO - Iyo Itsva ...
Mutambo webhodhi unonakidza kwaunotamba makadhi uye unofanirwa kushandirapamwe. Kutarisira, kunzwira tsitsi neshamwari dzako, uye kumhanya zvinokutungamirira mukukunda. Mutambi wega wega anofanira kuedza kufungidzira mhinduro dzinopihwa nevamwe vatambi vamwe vachiyedza kufungidzira dzavo.
Tenga ndine Duo
EXIN Fiesta - Mutambo we ...
Ibhokisi rine 3 mu1. Iwe uchawana mutambo wemhondi, umo vatambi vasina mhosva vanofanira kuona kuti mhondi yakavanzika ndiani, mumwe mutambo wechikwata, paunofanira kufungidzira mazwi akawanda sezvinobvira uchitevera mitemo yeraundi rega rega (tsananguro. , kutevedzera, kudhirowa, ruzha), uye mutambo wekumhanyisa, unoedza kupindura akawanda makadhi sezvinobvira mu1 min nechikwata chako.
Tenga EXIN Fiesta
KuParoti Kana hongu kana kwete Hapana zvakavanzika
Al Loro Mitambo - Ni Si Ni ...
Mutambo wetafura wevakuru wakanakira mapato neshamwari. Inosanganisira kupindura gumi akagadzirira uye spicy mibvunzo pasina kuti Hongu kana Kwete. 10 vanhu kana vakawanda sezvaunoda vanogona kutamba. Nzira yekushamwaridzanawo nevamwe vanhu vauchangobva kusangana navo kana kuma outing for drinks.
Tenga Kwete hongu kana kwete
Kune mamwewo mitambo yebhodhi yevechidiki, ine mweya mutsva uye wemazuva ano wakanangana nezvizvarwa zvitsva. Zvigadzirwa zvine pwere jargon, zvine dingindira rezera rino, kana izvo zvinoreva ruzivo rwehunyanzvi hutsva, maitiro, nezvimwe. Mimwe mienzaniso yeizvi ndeiyi:
Dungeons & Dragons Bhokisi ...
Ndiyo imwe yemitambo inonyanya kufarirwa. Madhiragoni nemakomba ave akakurumbira kunyanya mushure meThe Big Bang Theory series, sezvo mavara ayo aimbotamba. Imwe yeakanakisa bhodhi mitambo kana iwe uchida fungidziro uye fungidziro. Mutambo wekutaura nyaya umo vatambi vanofanirwa kunyura mune ese marudzi epic adventures, kubva pakuongorora mazes, kusvika pakubira pfuma, kurwa nemamonsters ane mukurumbira, nezvimwe.
Tenga D&D starter box
Tenga D&D Essential Kit
Goriyati Game board, ...
Mutambo unosanganisa mimwe mitambo kuita imwe. Iyo imhando yemazano, uye iwe unofanirwa kudzidza kuvhara vanokupikisa uye kubvisa zvidimbu zvavo mubhodhi vasati vazviita newe. Unogona kutamba wega kana nemubatanidzwa. Iwe uchaona kuti inoratidzika sematatu mumutsara, kunyangwe mune izvi iwe unofanirwa kuisa 5 machipi eruvara rumwe chete, vertically kana diagonally, asi zvichienderana nemakadhi akakubata muruoko rwako, sekunge ari poker.
Zita rinonakidza, rine simba uye revechidiki umo iwe uchave murwere muchipatara chepfungwa anotenda chinhu kana mhuka, nemitambo ye90-yechipiri apo vatambi vasingagoni kutaura, asi nemaoko vanofanira kuita kuti vamwe vazive kuti chii. Vanogona kutamba 2 kana kupfuura, uye yakakodzera kweanopfuura makore masere. Asi chenjerera, sezvo "chiremba" usarega chiremba kuti aone zvauri, sezvo ari iye oga weboka asina kufanana ne "chota".
Tenga ndiri banana
Vedzinza reMatsotsi Ngatirambei tichitadza
Imwe zita mune ino nhevedzano yeSpanish board mitambo. Imwe yemitambo iyo ihooligan uye nekuseka kwakavimbiswa. Unganidza vaunoshanda navo, sanganisa makadhi, uye tanga neyekutanga. Kune mhando ina dzemakadhi matsva, kupomerwa, kunetsa munharaunda, WTF! Mibvunzo uye makadhi asina chinhu kuti iwe uuye nezvaunoda.
Tenga Tirambe tichitadza
Mitambo yebhodhi yevaviri
ari mitambo yebhodhi yevaviri Iwo makirasi, uye kune akawanda awo. Kutamba se de facto vaviri, kana chero imwe mhando yevakaroora. Yakakwana apo vanhu vazhinji havagone kuungana uye hazvigoneke kushandisa mamwe mabhodhi anowanzoda mapoka makuru kana zvikwata. Mitambo yebhodhi yepamusoro yevakuru verudzi urwu ndeiyi:
Kuva netafura yedziva muimba isina nzvimbo yakawandisa haisi nguva dzose inogoneka, asi netafura iyi yekudyira inoshanduka kuva dziva, ndizvo. Kushanda uye kunakidzwa zvinouya pamwe chete mune ino inotendeuka tafura inoyera 206.5 × 116.5 × 80 cm pakureba, hupamhi uye kureba. Inosanganisira zvese zvinongedzo zvekutamba uye zvinogona kusarudzwa ne tapestry mune akasiyana mavara.
Tenga pool table
Falomir - Nzvimbo 4 Mutambo ...
Chips yemavara maviri, vatori vechikamu vaviri. Pfungwa ndeyekuvaisa mupanera kuyedza kugadzira mitsetse ye4 mumutsara weruvara rwako. Muvengi anofanira kuita zvimwe chetezvo, achikuvharira kuti usazozviwana.
Tenga 4 Online
(Un) vanozivana? -...
Haisi chete mutambo webhodhi wevakuru vaviri, asi yakakosha kune vakaroorana. Mariri iwe uchakwanisa kuyedza izvo zvaunoziva nezve mumwe wako, nemibvunzo nezve hupenyu hwezuva nezuva, hunhu, hukama hwepedyo, zvaunofarira, nezvimwe. Sarudza tsamba ine mubvunzo, vhota mhinduro inonyatsokunakira, uye ita kuti mumwe munhu apindure kuti aone kana ichienderana ...
Tenga (Un) vanozivana?
Mumwe mutambo webhodhi wakagadzirirwa vakaroorana. Nezvo iwe uchakwanisa kusimbisa zvisungo uye kukubatsira kuti usvike pakuziva vaviri vacho zviri nani, kunyangwe mune zvakavanzika zvepedyo. Zviri nyore kutamba, kune zana makadhi ane mibvunzo akagadzirirwa kutungamira kune yakapfuura, ramangwana, manzwiro, mari, zvishuwo, hushamwari, nezvimwe.
Devir Chakavanzika Code Duo
Devir- Chakavanzika kodhi ...
Iwo mutambo wekubatana, kudzidza nekunakidzwa. Zvinokutendera kuti utambe kuti uve anokurumidza uye akangwara kuti uwane zvinyoro-nyoro uye zvisinganzwisisike zviratidzo uye kupinda mushangu dzevasori yakavanzika kuti uwane zvakavanzwa uye nokudaro kuhwina mutambo mudzvanyiriri wako asati aita.
Tenga Duo Chakavanzika Code
Mutambo wemugungwa waunotamba nemakongiresi kuyedza kunyudza zvikepe zvemudzvanyiriri wako. Vachave vari munzvimbo dzaakasarudza, uye haugone kuvaona uye iye haakwanise kuona ako. Inotambwa isingaoni, uye kuyedza kutsvaga pavari kuti vabvise. Pasina kupokana imwe yeClassics kune maviri ...
Tenga Sink the Fleet
ARTAGIA Mutambo Unonakidza uye ...
Mutambo unonakidza wakasarudzika wevakaroora maunogona kuvandudza kusavimbika, shinga nehurukuro dzinosetsa, flirt, nezvimwe. Sarudza kadhi, pindura mubvunzo, kana kuti taura nyaya yerudo. Unoshinga here?
Strategy bhodhi mitambo
Strategic mafani anoda kusiya Warcraft, Zera reEmpires, Imperium, nezvimwewo, uye chinja kumitambo yepatafura yetafura vanonakidzwa nemazita akadai:
Devir - Catan, mutambo we ...
Iwo mubairo-kuhwina zano mutambo, uye nevatambi vanopfuura mamirioni maviri. Zvinoda kutariswa uye kuve nyanzvi yekukunda. Inokurudzirwa kune makore gumi zvichikwira uye kune 2 kana 10 vatambi. Mariri iwe uchave mumwe wevakatanga kugara pachitsuwa cheCatan, uye mataundi ekutanga uye zvivakwa zvichatanga kuoneka. Zvishoma nezvishoma iwe uchashanduka, mataundi anoshandurwa kuita maguta, nzira dzekufambisa uye dzekutengesa dzinovandudzwa, nzira dzekushandisa zviwanikwa, nezvimwe.
Imwe yeakanakisa zano mitambo uye imwe yepamusoro-soro. Inosanganisira bhodhi rine zvinokwanisika kuwedzera kuwedzera mamwe mikana uye zvirimo. Inokodzera vatambi 2 kusvika ku5, uye inokodzera mazera manomwe zvichikwira. Vatambi vanopfuura mamirioni gumi vakapinzwa pamutambo uyu umo iwe uchafanirwa kuwedzera nharaunda yako, kurwa uye kukunda zvinhu zvitsva.
Hasbro Gaming- Njodzi ...
Imwe yemahombe ehurongwa umo kukundwa kwehumambo hwako kunokunda. Iine mazana matatu manhamba, makadhi emamishini, ane gumi nemaviri mamishini akavanzika, uye bhodhi rekumisa mauto ako uye kurwa muhondo dzinoshamisa. Mutambo uzere nemibatanidzwa, kurwiswa nekushamisika, uye kutengesa.
Diset- Stratego Chekutanga ...
Makore 8 zvichikwira uye kune 2 vatambi, Stratego ndeimwe yeakanakisa nzira yebhodhi mitambo yevakuru. A classic board apo iwe unogona kurwisa uye kuzvidzivirira iwe kuedza kukunda muvengi mureza, kureva, rudzi rweCTF. Nezvimedu makumi mana zveuto rezviyero zvakasiyana izvo zvinozokwanisa kuyedza kufunga kwako zvine musoro uye zvine hungwaru.
Kune akati wandei mavhezheni eMonopoly, asi imwe yeakanyanya kubudirira ichiri yemhando yepamusoro. Kunyangwe usiri mutambo wezano rekushandisa, rinotoda hungwaru uye kuziva maitiro ekuziva kutenga nekutengesa kuti uwane humambo hwehupfumi.
Mitambo yekubatana yakanakisa
Kana ari mitambo yebhodhi yekushandira pamweKutamba nemibatanidzwa, iwo akanakisa mazita aunogona kutenga atove:
Mutambo webhodhi wemazera ese kubva pamakore masere. Iwo mutambo wekubatana waunofanirwa kuyedza kugadzirisa chakavanzika, uye vese vatambi vanohwina kana kukundwa pamwechete. Chinangwa ndechekuona kuti chii chiri kuseri kwerufu rwemweya weiyo imba huru uye kuita kuti mweya wake uzorore murunyararo. Mumwe mutambi anotora chinzvimbo chemweya, uye vamwe vese vatambi vanotamba nemasvikiro vanogashira nhevedzano yezvinyorwa zvinonongedza kune chakavanzika ...
Mutambo uyu unokuendesa kuna Kukadzi 24, 1895, muLondon. Bhomba raputika muParamende uye Sherlock Holmes, pamwe nemubatsiri wake, vachabatanidzwa kuti vadzidze chokwadi nezvenyaya iyi.
Devir-Iyo Yakarambidzwa Island ...
Mutambo wekuhwina-mubairo wekubatana kwemhuri. Mariri unonyura muganda revatambi vanofanirwa kudzoreredza hupfumi hwechitsuwa chisinganzwisisike. Inogona kuridzwa kubva pazera re10. Sanganisa makadhi uye manhamba ebhodhi kuyedza kudzivirira njodzi uye kuwana hupfumi.
Tenga The Forbidden Island
Z-man Mitambo Spain ...
Uyu mutambo wemubatanidzwa wakakodzera vatambi vaviri kusvika vana, vane makore gumi nemana kana kupfuura, uye maunofanira kuedza kuponesa vanhu kubva padenda. Zvirwere nezvipembenene zvapararira zviri kuuraya vanhu vakawanda, uye unofanira kuwana mushonga wacho. Kuti vaite izvi, vanofamba kutenderera pasirese vachitsvaga zviwanikwa zvinodiwa kuti vagadzirise mushonga ...
Uyewo vakuru Vanogona kuva nenguva inonakidza vachitamba mitambo yakawanda yebhodhi, kune mamwe mazera e "Senior". Mamwe atove echinyakare, uye anoramba achimutsa kufarira muzera iri, mamwe ari matsva, zvirinani munyika yedu, sezvo akaunzwa kubva kune dzimwe nzvimbo pasirese. Mazita ekutarisisa asingagone kushaikwa ndeaya:
2000 chidimbu chemufananidzo
Educa - Zviratidzo zve ...
Chidimbu chevakuru, chine zvidimbu 2000, uye nemufananidzo wakanaka wezviratidzo zveEurope. Iyo puzzle, kana yaunganidzwa, ine zviyero zve 96 × 68 cm. Machipisi ayo ndeemhando yepamusoro uye anokodzera zvakakwana, pamusoro pekugadzirwa kwezvinhu zvine hushamwari. Inokodzera kutamba nevana kubva pamakore gumi nemaviri, vakuru nevakuru.
Tenga Puzzles yevakuru
Pirate ngarava 3D puzzle
Iyo inonakidza 3D pikicha yekugadzira yakanaka pirate ngarava. Yakagadzirwa neinopokana neEPS foam, iine 340 zvidimbu zvekugadzira replica yeQueen Anne's Revenge muchiyero, ine zviyero zve68x25x64 cm. Kana yangoungana, ine mwenje we LED ine marambi gumi nemashanu anofambiswa nemabhatiri maviri AA. Inokodzera zera 15 zvichikwira.
Tenga 3D puzzle
Yechinyakare pakati pechinyakare uye yemhuri yese, kunyangwe kunyanya nevakuru mundangariro. Inosanganisira otomatiki bass dhiramu, mabhora ane manhamba, uye kiti yemakadhi ekutamba. Ani nani anowana mutsetse uye bingo kutanga, anohwina.
Cordays - Nyaya ye ...
Makadhi ane musanganiswa wenhamba dzaunofanirwa kusanganisa, kugovera pakati pevatori vechikamu, uye zvishoma nezvishoma kuenzanisa nhamba. Uyo anotanga kuisa machipisi ake ese achahwina.
Mattel Mitambo UNO Yekutanga ...
Mutambo wakajairwa uye wechinyakare kadhi unobvumira vatambi vaviri kutamba vari vega kana muzvikwata. Chinangwa ndechekuve wekutanga kupera makadhi. Uye kana uine kadhi rimwe chete rasara, usakanganwa kusheedzera UNO!
Lewpox Tic Tac - Mutambo we ...
Mutambo weti-tac-chigunwe, kuyedza kuisa zvimiro zvitatu zvakaenzana mumutsara, wakatwasuka, wakatwasuka kana kuti diagonally. Uye edza kudzivirira muvengi wako kuti asazviwana kare.
Tenga 3 mumutsara
Chess board, cheki uye backgammon
A 3-in-1 board yekutamba iyi mitambo mitatu yekare isingade sumo. Kunyange zvazvo ingave yakanakira vakwegura, mitambo isina zera, saka vana vanogonawo kutamba.
Fournier Parchis uye Goose ...
Mutambo weOCA neParcheesi ndeimwe yemitambo yakakurumbira nguva dzese. Nebhodhi rinodzoreredzwa iri unogona kuve nemitambo miviri yekunakidzwa kwemhuri.
Ehe, pakati peiyo classics iwe haugone kupotsa kadhi tafura mitambo. NechiSpanish dhizaini kana neFrench deki, sezvaunoda. Iwe unozogona kutamba zvisingaverengeki mhando dzemitambo, sezvo nedhishi rimwe chete kune akawanda (Uno, Pócker, Chinchón, Cinquillo, Mus, Solitaire, Blackjack, 7 nehafu, Briscola, Burro,…).
Tenga dhizaini yeSpanish Tenga poker deki
Ehe, chimwe chikamu ichi hachigone kunge chisipo, icho chachangobva kubuda nekuda kwekufambira mberi kwehunyanzvi hutsva. Uye ndezvekuti komputa, iyo Internet, uye chaiyo chaiyo, yakawedzera chokwadi kana yakasanganiswa chaiyo tekinoroji yakashandurawo nzira iyo mitambo yebhodhi inotambwa. A chizvarwa chitsva chemitambo yebhodhi yevakuru yasvika, uye iwe unofanirwa kuziva mapurojekiti aya anonakidza:
Mitambo yebhodhi yepamhepo uye mapurogiramu
Kune akati wandei epamhepo bhodhi mitambo yekutamba nemhuri yako kana shamwari dziri kure, pamwe nemamwe nharembozha ayo anobvumidza iwe kuti utambe makirasi evazhinji mode kana kupokana nemuchina. Unogona kutsvaga Google Play uye App Store app zvitoro.
Mamwe mapeji ewebhu ane mahara tafura muto Ndizvo:
Bhodhi Yemutambo Arena
Augmented chokwadi mitambo
Unogona here kufungidzira mutambo webhodhi maunogona kudzoreredza kuwanda kwemitambo yakasiyana, uye kwaunogona kuona zvivakwa uye zvinhu mumativi matatu, uye uko mataira asiri mataira, asi anouya kuhupenyu uye ave magamba, zvikara, mhuka, nezvimwe, nezvimwe. .? Zvakanaka, rega kufungidzira, izvo zvatove pano nekuda kwe augmented reality magirazi uye inonzi Tilt Five.
Mufananidzo wemahara (Mutambo Webhodhi reVana) kubva https://torange.biz/childrens-board-game-48360
Vamwe ve kusahadzika kazhinji uye mibvunzo inowanzo bvunzwa pamitambo yebhodhi yevakuru ndeiyi inotevera:
Ndeipi mitambo yebhodhi yevakuru?
Iyi ndiyo mitambo yebhodhi inowanzova nedingindira risingakodzeri vadiki, kunyangwe isiri yese. Uye hazvifanirwe kuve nekuti vane zvemukati zvinoenderana nevanhu vakuru, asi nekuti zvakagadzirirwa vanhu vakuru, saka zvingangoita kuti vadiki vari mumba havazive kutamba kana kufinhwa.
Kutengerei rudzi urwu rwevaraidzo?
Kune rimwe divi, pese panotambwa mutambo nemhuri kana shamwari, nguva huru inopedzwa, uye kuseka kunovimbiswa. Zvakare, ikozvino nemamiriro edenda inogona kuve chirongwa chikuru uye chakachengeteka kutandara. Kune rimwe divi, ivo zvakare vanokubatsira kuti ushamwaridzane zvakanyanya uye kutiza kubva paPC skrini kana mutambo wekoni, iyo inowanzova mitambo inosimudzira hunhu uye kuzviparadzanisa nevamwe. Zvakatopesana nemitambo yebhodhi yekirasi, iri pedyo. Iwe unogona kutotora sechipo chikuru cheKisimusi, kana chero rimwe zuva.
Kune zvitoro zvakawanda zvine hunyanzvi zvekutenga mitambo yebhodhi, pamwe nezvitoro zvematoyi zvinosanganisira iyi mhando yemitambo yevakuru. Nekudaro, imwe yeakanakisa sarudzo ndeyekutenga online pamapuratifomu akadai seAmazon, sezvo uine huwandu hukuru hwemitambo zvekuti zvinokwanisika kuti hauzowana muzvitoro zvese. Pamusoro pezvo, kune dzakasiyana siyana dzemitengo uye dzimwe nguva kukwidziridzwa kwaunogona kutora mukana nazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndipei zororo » General » Yakanakisa bhodhi mitambo yevakuru
Yakanakisa mitambo yebhodhi yevana